Ebe nkiri 5 na Kiev | Akụkọ Njem
Ebe nkiri 5 na Kiev
Mariela Carril | | Kiev, Ihe ị ga-ahụ
Likemasị gị Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe? Ọ bụ akụkụ nke kọntinent ahụ achọpụtabeghị yabụ na ị na-achọta ebe njedebe dị egwu iji gaa. Kiev Ọ bụ isi obodo Ukraine na ọ bụ ezie na ọ bụ nnukwu obodo na-ekwo ekwo ma nwee ụwa ọ nwere amara.
Iji mee ka ọtụtụ nleta ahụ, ọnụnọ kachasị mma ga-abụ ụbọchị anọ, mana ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ mmadụ enweghị ike ịnọ otu ebe ogologo oge, yabụ anyị na-eche maka ịnọ ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ iji hụ ọnụ ọgụgụ a na-adọrọ mmasị. Chọsie ike ihe ị na-agaghị echefu na Kiev.
2 Ebe nkiri 5 na Kiev
Kiev ma ọ bụ Kyiv nwere a ọnụ ọgụgụ ndị dị ihe dị ka nde mmadụ atọ a mụrụ ya na nnabata dị mkpa n'okporo ụzọ azụmahịa dị n'etiti Baltic na Mediterenian. Na narị afọ nke iri na atọ akụkụ a nke Europe bụ ndị Mongol wakporo ma kewaa ya ruo mgbe ebighi ebi, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ ọdịnihu ya site n'oge ahụ gaa mba ndị ọzọ.
Taa obodo ahụ na-emeghe n'akụkụ abụọ nke Osimiri Dnipier nke na-asọba n'Oké Osimiri Ojii. Akụkụ ọdịda anyanwụ bụ nke kacha ochie wee chọọ ya mma ugwu osisi, ugwu ndị a ma ama na Kiev. Osimiri ahụ nwere ike ịnyagharị ma nwee usoro ọnụ ụzọ ámá niile, ebe ọ bụ na ọ dị obere osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ọdọ mmiri. Mmiri dị ukwuu na-eme ka obodo ahụ na-enye ndị bi na ya 16 osimiri na ihe karịrị iri atọ ebe ntụrụndụ.
Kiev nwere usoro nke ụgbọ ala, obere bọs, trams, metro, tagzi, funicular na ụgbọ oloko nke gafere ya. Usoro a, ewepu tagzi, jiri ọnụego ewepụghị ego.
Mpaghara Pechersk bụ akụkọ ihe mere eme na n'etiti obodo ahụ, n'etiti ugwu Dnieper na Lypky Klov. Aha ahụ sitere na Kiev Pechersk Lavra Caves, ebe obibi ndị mọnk nke Ọtọdọks onye amuru n'ime ọgba na azu 1051. Taa bu Ihe Nketa Worldwa na narị afọ gara aga ọ gbanwere ya ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya nke ụlọ mgbịrịgba, katidral, usoro ọgba ala na nnukwu mgbidi na-agbachitere.
Nwere ike ịkwụsị ịma ihe Nnukwu Lavra Bell TowerOgologo 96 dị elu, Katidral Dormition (nke a wughachiri mgbe a lụsịrị Agha Worldwa nke Abụọ) na obere ụlọ ụka ochie ndị ọzọ mara mma. Taa ebe a ọ bụ ihe ngosi nka, otu n'ime ndị kasị ibu na Kiev.
La Ogige Maidan Nezalezhnosti Ọ bụ ebe etiti Kiev kemgbe ọdịda Soviet Union. N'ebe a, ihe mgbanwe nke 2004 na 2014 mere, ọ bụkwa isi obodo nke na-etinye nnukwu ụlọ ọgbara ọhụrụ, nke ụdị ụlọ Soviet. Site na ya Okporo ámá Khreshchatyk, nke nwere uzo anọ na otu kilomita.
Bọmbụ ahụ na ndị agha nke WWII bibiri ya ma mesịa wughachi ya na ụdị Soviet. Na ngwụsị izu ọ bụ na-agagharị agafe ka ị nwee ike ịga leta ya.
El Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Agha Ukwu Patriotic Ọ dị nso na Pechersk Lavra ma bụrụkwa ihe ncheta nke na-echetara agha German - Soviet. Ejiri ya na May 9, 1981 ma ị ga - ahụ tankị, ụgbọ elu nke ụdị dị iche iche, ụgbọ ala, ihe ncheta yana ị nwere ike ịnụ egwu agha Soviet. Ihe kacha mma bụ gigantic Ihe ncheta nke mama Ukraine, -agaghị ekwe omume ileghara n'ihi na ọ bụ gigantic na ya 102 mita elu. Lee foto ị ga-ese! Ha abụọ si n'elu, site na ikpo okwu ya na ịdị elu isi ya, ma site n'ebe dị anya.
La Katidral St. Sophia Ọ bụ ụka kacha ochie na Kiev ma Ihe Nketa Worldwa. Ọ bụkwa nnukwu saịtị, nwere ọtụtụ ụlọ gụnyere ụlọ mgbịrịgba, katidral na ụlọ akwụkwọ. Ga-ahụ ụyọkọ ọla edo ọzọ dị nso: nke Ebe obibi ndị mọnk nke San Miguel. Nwere ike ịga leta ya n'efu. Ọ sitere na Middle Ages mana akwatu ya na WWII wee weghachite ma mepee. Ọ bụ ebe jupụtara na ihe ndozi na ihe ịchọ mma ma ọ bụrụ na ị na-amasị nka ọ dị mma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanahụ obodo ukwu ahụ, enwere ebe dị na Kiev nke ị ga-agarịrị: Andriyivskyy Agbadata. Ọ dị ka ebe onye bohemian nke Kiev họpụtara ibi, ebe ndị na-ede uri na ndị na-ese ihe bi, a chioma nke Montmarte. N'otu uzo bu Podil, nke dị n’elu elu obodo ahụ. Ebe a ụlọ ndị ahụ pere mpe, mara mma ma maa mma. Okporo ámá dị warara ma ọ dị mma maka ịgagharị na ntụrụndụ.
Ruo ugbu a ị nwere ebe ise kachasị njem nlegharị anya na Kiev, nke ị na-agaghị echefu na mbata mbụ gị. O doro anya na ọ bụghị naanị ihe isi obodo Ukraine na-enye, enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie, agbata na ebe nkiri. O nwedịrị ndị ụfọdụ nke na-adọrọ mmasị nkịtị ya mere ọ bụrụ n’inwere oge ịdekọ aha na ngosipụta ndị a:
Chernobyl Ukrainian National Museum: Kiev dị naanị 100 kilomita site na ụlọ ọrụ ike nuklia. Na mpụga ị ga-ahụ ụgbọ ihe mberede, ndị agha jeeps na tank. Okporo ụzọ ahụ bụ steepụ nwere akara nke aha obodo niile metụtara ọghọm nuklia nke afọ 1986. Ọ bụ obere ihe ngosi nka. Ọ dị na 29 Khoryva Street ma mepee site na Mọnde ruo Satọde site na 10 ruo 6 elekere. Emechiri na Sọnde na Mọnde ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla.
Ọnụ zọ Goldenmá Golden nke Kiev: Ọ bụ ochie ụzọ wughachiri nke ahụ bụ otu n'ime ọnụ ụzọ obodo ahụ. Ihe mbụ sitere na 1037 na 1982 obodo ahụ mechara afọ 1500 mbụ nke akụkọ ntolite ya mere e weghachiri ya n'oge ahụ. Ihe owuwu ahụ nwere esemokwu n'ihi na amaghị nke ọma ihe ọ dị na mbụ, mana na njedebe brik a na osisi osisi dị na Volodymyrska Street nọgidere.
La Ọdụ ụgbọ elu Arsenalnabụ Ọnọdụ ọdụ ụgbọ oloko kachasị ala n’ụwa. Ihe dị ka mita 105.5 miri! Ihe mgbaputa bu ihe anwucha ma ịrịgo na ala na-ewe ogologo nkeji ise, n'eziokwu ị ga-agwakọta ọtụtụ iji rute n'elu ikpo okwu. E wuru ya na 60s.
Ọfọn, ị maara, ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Kiev n'etiti ọdịnala kachasị site na njem nleta na nke na-adịghị ahụkebe. Obere na ntakịrị nwere ike ime ka nleta gị ghara ichefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ebe nkiri 5 na Kiev
Echiche 10 maka ịpụ na Ista